बिहान खाली पेटमा पानी पिउँदा केके फाइदा हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
बिहान खाली पेटमा पानी पिउँदा केके फाइदा हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
२०७८ श्रावण, ३२ सोमवार
पानी विना जीवनको कल्पना गर्न सकिदैन । पर्याप्त पिउनाले पाचन प्रणाली, छाला र कपाललाई समेत प्रशस्तफाइदा पुर्याउँदछ ।
कुनै पनि स्वास्थ्य समस्यामा डाक्टरहरुले पर्याप्त पानी पिउन सल्लाह दिन्छन् । स्वास्थ्यका लागि एक दिनमा कम्तिमा पनि १० गिलास पानी पिउनुपर्छ ।
पानीले शरीरका विकारजन्य पदार्थलाई बाहिर ल्याउन सहयोग गर्दछ । खाली पेट पानी पिउदा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो । प्रायः जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी पिउँछन् ।
उनीहरू पानी पिउनुभन्दा आधा घण्टापछि मात्रै ब्रेकफास्ट लिन्छन् । यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रिय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ। खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।
अझ मनतातो पानीको सेवन स्वास्थ्यका लागि झनै फाइदाजनक हुन्छ । बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुका फाइदा यी हुन्ः
खाली पेट प्रशस्त पानी पिउदा पेटका विकार शौचमार्फत जाने र पेट सफा हुन्छ। यसले पाचन प्रणालीलाई पनि सहयोग गर्छ । तपाईलाई एक बिहानै शौच आउदैन भने कम्तिमा दुई गिलास मन तातो पानी खाली पेट खाँदा खुलेर शौच आउछ।
तपाई बाथरुम जाँदा शरिरका उत्तेजित र विकारलाई बाहिर फालिदिनुुहुन्छ। जति धेरै पानी पिउनुहुन्छ त्यति धेरै विकार शरिरबाट फाल्न सहयोग पुग्छ।
मानिसलाई बारम्बार टाउको दुख्नुको मुख्य कारण प्रर्याप्त पानी नपिउनु हो। डिहाइड्रेसनको मुख्य लक्षण नै टाउको दुख्नु हो। तसर्थ बिहान उठ्नेवित्तिकै पानी खानु भयो भने यो समस्याबाट मुक्त हुनसक्छ । टाउको दुख्नबाट बचाउनको अतिरिक्त यसले श्वासको दुर्गन्ध र अन्य व्याक्टेरियाको संक्रमणबाट जोगाउछ।
खाली पेट प्रशस्त पानी खादा अनुहारको चमक बढाउछ। शरिरमा जति बढी विकार र उत्तेजित तत्व हुन्छ त्यति नै तपाईको अनुहारको छाला नराम्रो बनाउछ । तर प्रशस्त पानी खाँदा विकार हट्ने भएकोले अनुहारको सुन्दरतामा निखार आउँछ।